Xiriirka Soomaaliya Iyo Kenya Ee Soo Laabtay Saameyn Ma ku Yeelanayaa Dacwadda Badda ? | Gaaroodi News
Xiriirka Soomaaliya Iyo Kenya Ee Soo Laabtay Saameyn Ma ku Yeelanayaa Dacwadda Badda ?
Uhuru iyo Farmaajo ayaa ku kulmay Nairobi
Dowladda Soomaaliya ayaa Khamistii shaacisay in Soomaaliya ay dib usoo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Kenya ka dib markii ay xiriirka u jartay bishii Deseembar, iyadoo xukuumadda Nairobi ku eedeeysay inay sii faringelin ku haysa arrimeheeda siyaasadda.
Xukuumadda Nairobi ayaa dhankeeda war qoraal ah ku sheegtay inay dooneyso in xiriirka labada dal ay mas’uuliyiinta Soomaaliya sii wanaajiyaan.
Dhanka kale Madaxtooyada Kenya ayaa barteeda Twitter-ka ku soo qortay kaliya in Madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka helay “fariin gaar ah” amiirka Qadar oo uu u gudbiyay ergeyga gaarka ah ee wasiirka arimaha dibada ee “dhexdhexaadinta xallinta khilaafaadka” u qaabilsan Qadar.
Xukuumadda Muqdisho ayaa sidoo kale ku eedeysay Nairobi inay faragalin ku hayso howlaha doorashada ee Jubaland, oo ah gobol ka tirsan koonfurta Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika.
Farogelinta Kenya lagu eedeeyay ee Jubbaland ma la xalliyay?
“Waxaa heshiiska aasaas u ahaa in dalna aan dal kale farogelin, in darsinimada la isxtiraamo, in waddankasta aanu sameyn tallaabo wax u dhimiyesa xornimadiisa, sida meesha ka muuqatana wax allaale wixi arrimaha gudaha Soomaaliya iyadaa iska leh mana ogolaaneyso in la farogeliyo, waana la isla gartay arrintaas iyada ah inaanay dhicin,” ayuu yiri Wasiir Al-Cadaala.
Heshiiska Soomaaliya Iyo Kenya saameyn maku yeelanayaa Dacwaddii badda?
Hardan dheer ka dib kiiska waxa uu haatan yaalla oo ay dacwaddiisa ka socota Maxkamadda Cadaaladda Adduunka inkasta oo ay Kenya qaadacday.
Wasiir ku xigeenka oo su’aashaas ka jawaabaya ayaa sheegay inaysan saameyn ku yeelanayn arrinta dacwadda badda.
Maxaa khilaafka markii hore keenay?
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Maxamed Cali Nuur, oo bayaanka ka akhrinayay warbaahinta dowladda ayaa go’aankooda ku sababeey faragelin uu sheegay in ay kaga imanaysay Kenya.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa u muuqatay in dowladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso umuuraha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyadoo cadaadis ku haysa, madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, si uu u fuliyo qorshaheeda ku aaddan faragelinta iyo carqaladaynta heshiiskii siyaasadeed ee doorashooyinka ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ku gaareen Muqdisho 17-kii Sibteembar 2020,” ayuu yiri.
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, Macharia Kamau, oo arrintaas ka hadlayay wuxuu wargeyska Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi u sheegay in xukuumadda Kenya ay ka xuntahay go’aanka Soomaaliya ay ugu yeeratay safiirkeeda, waxa uuna ballan qaaday in labada dal ay arrintan si diblomaasiyad ku saleysan uga wada xaajoon doonaan.
Wuxuu tilmaamay inay jawaab rasmi ah ka soo saari doonaan warka Soomaaliya ay soo saartay “iyagoo maraya wadiiqooyinka ku haboon.” Sannad ka hor, bishii November 2019, waxay labada madaxweyne ka heshiiyeen arrimo ay ka mid ahay duullimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi.
Dhankiisa-se xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Maxamed Cali Nuur, ayaa sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya aysan “marnaba aqbali doonin fal waliba oo qaranimadeeda iyo amnigeeda dhaawacaya.”
“Dhaqamada Kenya waa kuwo ka baxsan curfiga diblumaasiyadeed ee dalal ay ka dhaxayso dano iyo darisnimo, waana dhaqan ka baxsan dhammaan axdiyada iyo heshiisyada diblumaasiyadeed ee caalamiga ah.
“Sidaas daraadeed dowladda Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la soo farageliyo ama lagu dhaqaaqo falkasta oo wax u dhimaya madaxbannaanida iyo deganaanshiyaha dalkeenna,” ayuu yiri.
Goormuu khilaafkan soo xoogaystay?
Muranka dhanka badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah soo jiitamayay, waxaana sannadkii 2015-kii ay dowladda Soomaaliya u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda ee Adduunka ee ICJ, dacwad ka dhan ah Kenya.
Dacwadaasi ayaa weli hortaalla ICJ, waxaana garsoorayaasha ay oggolaadeen in maxkamaddu ay dhageysan karto dacwadda la xiriirta arrintan, in kastoo Kenya ay marwalba dooneysay in arrintan lagu dhameeyo qaab is-fahan ah oo bannaanka ka ah maxkamadda. Arrintan waxay soo billaabatay markii uu soo shaac baxay khilaafka dhanka xuduudda badda ee labada dal u dhexeeya
Dhanka kale Dowladda Soomaaliya ayaa horraaantii sannadkan hakisay duullimaadyada rakaabka iyo jaadka Kenya taas oo qeyb ka ahayd tallaabooyinka lagu xakameynayay fafitaanka fayraska Korona.
Balse dowladda Soomaaliya dib ayey u furtay duullimaadyada, haddana jaadka weli waxaan saaran xiyaraad.
Kenya waxay maalin walba Soomaaliya u dhoofin jirtay jaad loo iib geeyo magaalooyinka kala duwan ee dalka.
Sida uu sheegay wargeyska The Foreign Policy, 15 diyaaradood oo jaad wadda ayaa maalin walba ka degi jirtay magaalooyin badan oo Soomaaliya ah, waxaana ganacasatada Kenya sannadkiiba la sheegay in ay ka soo galeysay lacag gaareysa $144 milyan oo doollar.
Dhanka kale goor sii horraysay ayuu xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya, Macharia Kamau, sheegay in ay jirto arrin in muddo ahba miiska saarneyd oo ah in dal ku-galka loo fududeeyo dadka ka imanaya Soomaaliya.